N'iji tụnyere usoro ịkwụ ụgwọ QIWI Wallet na Yandex.Money
Ọrụ azụmahịa na-enye gị ohere ịkwụ ụgwọ maka ngwaahịa na ọrụ na Ịntanetị. Ha nwere nchebe dị elu maka azụmahịa azụmaahịa ma nwee ike iso ndị ụlọ akụ akụ na ụba na-emekọrịta ihe. Na Runet, Yandex Money na QIWI Wallet ọrụ bụ ndị kasị ewu ewu.
Ịnyefe ego site na QIWI ka WebMoney
Site n 'ụba nke usoro nkwụ ụgwọ, enwere nsogbu ndị metụtara eziokwu ahụ bụ na ndị ọrụ nwere ego na ndekọ dị iche iche, ya mere, ha siri ike ịnyefe. Otu n'ime ọnọdụ nsogbu bụ ịnyefe ego sitere na akaụntụ QIWI gaa na akpa ego weebụ WebMoney. Na-agụkwa: Ịnyefe ego n'etiti akpa ego QIWI Otu esi esi zipu ego site na QIWI ka WebMoney Ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na ọ gaghị ekwe omume ịnyefe ego site na akaụntụ Qiwi na obere akpa WebMoney, n'ihi na ọ dị mkpa iji usoro nhazi oge, ichere maka nkwenye na ikikere ndị ọzọ.
Bulie akaụntụ QIWI site n'iji WebMoney
Ọtụtụ ndị ọrụ nwere ike inyefe ego n'etiti usoro ịkwụ ụgwọ dị iche iche, dịka ọ bụghị ha niile na-ekwe ka ịme ya n'efu. Ya mere, n'ọnọdụ a na ntanye site na WebMoney na akaụntụ Kiwi, nsogbu ụfọdụ na-ebili. Otu esi esi na WebMoney gaa QIWI E nwere ụzọ ole na ole iji nyefee ego site na WebMoney na usoro ịkwụ ụgwọ Qiwi.
Ịkwesịrị ịnyefee ego ọtụtụ mgbe, ọ gaghị adị mfe ịchere ogologo oge ruo mgbe ha si n'otu akaụntụ gaa na nke ọzọ, nke bụ ya mere usoro nkwụnye ụgwọ ndị ahụ ji bụrụ ihe dị mkpa nke na-ebufe ego site na otu akpa ego na nke ọzọ na ihe nke sekọnd. Usoro ịkwụ ụgwọ QIWI bụ otu n'ime usoro ngwa ngwa dị otú ahụ.
Ịmụta iji obere akpa QIWI
Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na kọmputa ọ bụla na-akwụ ụgwọ ego, ya mere, ọ bụrụ na ọ mụtara iji otu n'ime ha mee ihe, ọ bụghị mgbe niile ka ọ ga-eme ka onye ọzọ gbanwee ma malite iji ya mee ihe. Ọ ka mma ịmụta otú ị ga-esi jiri Kiwi mee ihe n'ụzọ dị mma iji nọgide na-arụ ọrụ na usoro ihe a ngwa ngwa.
Uwe ego QIWI bu ugwo ugwo ahia nke uzo. Na-akwado ọrụ na rubles, dollar, euro na ego ndị ọzọ. Ị nwere ike ịchọta ma wepụ ego site na obere akpa Qiwi n'ọtụtụ ụzọ. Ya mere, n'okpuru ebe a anyị ga-akọwa otú ị ga-esi na Sberbank gaa QIWI Wallet. Uzo esi eme ka ugbua QIWI megharia site na akaụntụ na Sberbank Ugwo ugwo Qiwi nyere gi aka imeju gi ma obu akpa nke onye ozo.
Otu esi ewepu ego n'aka QIWI
Mgbe ụfọdụ, ọ na - esiri ike ịnweta obere akpa ego ọ bụla, n'ihi na o siri ike ịme ụzọ kasị mma iji zere ọrụ dị elu na oge ichere ogologo oge. Usoro QIWI adịghị iche na ụzọ kachasị mma maka ịkwụsị ego, ebe ọ dị iche na ngwa ngwa, mana ọtụtụ ndị ọrụ ka na-ahọrọ ya.
Chọpụta ọnụ ọgụgụ nke obere akpa na usoro ịkwụ ụgwọ QIWI
Onye ọ bụla nke ọrụ ịkwụ ụgwọ akpa ego nke QIWI chọrọ ịma obere akpa ya maka ihe ọ bụla n'ime ya. Ọ dị nnọọ mfe ịchọta ozi a, a pụkwara ime ya n'ụzọ dị iche iche, anyị ga-edozi ya niile. Anyị na-amụta ọnụ ọgụgụ nke Qiwi Ihe kacha mkpa nke ịkwụ ụgwọ ụgwọ Qiwi bụ na nbanye ịbanye akaụntụ nke aka gị bụ nọmba ekwentị mkpanaaka nke akaụntụ ahụ na-agbakwunye na nke bụ ọnụ ọgụgụ nke obere akpa a.
Ịnyefe ego site na QIWI ka PayPal
Mgbanwe ego dị n'etiti usoro ịkwụ ụgwọ dị iche iche na-esiri ike ma nwee nsogbu ụfọdụ. Mana ọ bụrụ na ịnyefe ego n'etiti usoro ịkwụ ụgwọ nke mba dị iche iche, enwere nsogbu ndị ọzọ. Otu esi ebufe ego site na Qiwi ka Paypal N'eziokwu, ị nwere ike ịnyefe ego site na obere akpa QIWI gị na PayPal na otu ụzọ - na-eji onye na-agbanwe ego dị iche iche.
Ego nyefe site na QIWI obere akpa na Yandex.Money
Ịnyefe ego site na usoro nkwụnye ego gaa na onye ọzọ adịghị mfe mgbe niile, mana enwere ike idozi ya na usoro dị iche iche. Ndị a na-aghaghị iji, dịka ọmụmaatụ, nyefee ego site na obere akpa na usoro Kiwi na akpa nke usoro ịkwụ ụgwọ site na Yandex ụlọ ọrụ. Otu esi esi QIWI nyefee Yandex.
Leba anya nkwụnye ego nke QIWI
Ọrụ e-azụmahịa na-eme ka usoro nkwụ ụgwọ maka ngwaahịa na ọrụ na Ịntanetị dị mfe. Iji jiri obere akpa ahụ mee ihe, ọ dị gị mkpa ileba anya mgbe niile. E nwere ọtụtụ ụzọ iji lelee ọnọdụ akaụntụ gị na QIWI Wallet. Otu esi lelee QIWI Wallet Qiwi Wallet balance na-enye ndị ọrụ aka ịmepụta ọtụtụ wallets.
Isi ihe kpatara nsogbu QIWI Wallet na ngwọta ha
Onye ọ bụla maara na usoro ọ bụla na Intaneti ma ọ bụ nnukwu ọrụ ọ bụla apụghị ịrụ ọrụ n'enweghị ihe ọ bụla. N'uba oru a, ihe ndi mmadu choro ka ha na-aru oru mgbe niile. Otu usoro dị otú a bụ QIWI Wallet. Idozi nsogbu ndị bụ isi na Kiwi E nwere ọtụtụ isi ihe mere usoro ịkwụ ụgwọ nke Kiwi nwere ike ọ gaghị arụ ọrụ n'otu ụbọchị maọbụ oge.
Ịkwụ ụgwọ maka ịzụrụ na ọtụtụ ụlọ ahịa na ntanetị aghọwo ihe ọ ga-ekwe omume n'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụzọ ọ bụla dị mma, nke mere ha ji dị oke mma. Usoro Kiwi adịghị eguzo ma na-anwa ịmebata ụgwọ ya na ọtụtụ saịtị nke ụlọ ahịa na-ewu ewu. Otu esi akwụ ụgwọ maka ịzụta site na QIWI Ị nwere ike ịzụta ụfọdụ ngwongwo ma kwụọ ụgwọ ya na obere akpa Qiwi ọ bụghị nanị na ụlọ ahịa nke atọ, kamakwa site na nkwụnye ego n'onwe ya, ebe nhọrọ dị obere, ma ị ka nwere ike ịzụta obere ihe ịzụtara iwu na nkwughari nke ihe di egwu di iche iche).
Uzo esi emegharia obere akpa QIWI n'iji Yandex.Money service
Ka ọ dị ugbu a, ọ bụghị mgbe nile ka ọ ga-ekwe omume ịnweta na ịnyefe ego site na obere akpa na otu usoro ịkwụ ụgwọ na obere akpa na ọzọ. Mgbe ụfọdụ, usoro a na-ewe ọtụtụ ụbọchị, mgbe ụfọdụ ihe niile na-eme na nnukwu ọrụ, na mgbe ụfọdụ ma. Ma na nsụgharị nke Yandex.Money, Qiwi ka dị mma.
Ọtụtụ ndị maara na na nkwụnye ego QIWI Wallet, ọ dị nnọọ mfe ịmepụta akaụntụ ma malite iji ya mgbe nkeji ole na ole. Ịnagide mwepụ nke obere akpa bụ obere njọ, dị ka ọtụtụ usoro ego nke kọmputa. Otu esi ehichapụ akaụntụ na Qiwi Ọ bụrụ na e debanye aha onye ọrụ na usoro ahụ, mgbe ahụ maka ihe kpatara ya chọrọ ihichapụ akpa akpa Qiwi, a ga-eme nke a site na ụzọ abụọ.
Bind WebMoney ka QIWI
Usoro nkwụnye ego Electronic na QIWI obere akpa na-enye gị ohere ịkwụ ụgwọ maka ịzụta na Ịntanetị, nyefee ego n'etiti akụkọ, kaadị ego. Ọ bụrụ na ego ezughị oke na obere akpa, mgbe ahụ, a ga - ejupụta ya ọzọ. Iji zere ịnye ego ịkwụsị aka n'oge ọ bụla, ị nwere ike ijikọta QIWI Wallet na WebMoney akaụntụ na ibe gị.
Usoro Ịkwụ ụgwọ kaadị QIWI
Ezigbo usoro nkwụ ụgwọ na Russia na ụwa na-enye ndị ọrụ ha ohere ịnye kadị akụ na ọnọdụ dị mma, nchekwa ego dị mma na ịnweta nguzozi. Otu usoro dị otú a bụ QIWI Wallet. Otu esi enweta kaadị QIWI Visa Na ogologo oge, usoro QIWI bụ otu n'ime ndị ole na ole nwere kaadị maka onye ọrụ ọ bụla.
Ihe ị ga-eme ma ọ bụrụ na ego abịaghị na Kiwi
Mgbe ụfọdụ, ọ nwere ike ime na mgbe ịkwụ ụgwọ nke obere akpa Qiwi site na ọnụ ahụ abataghị na akaụntụ ahụ, onye ọrụ ahụ malitere ichegbu onwe ya ma chọọ ego ya, n'ihi na mgbe ụfọdụ, a na-ebufe nnukwu ego na akpa. Ihe ị ga - eme ma ọ bụrụ na ego adịghị abịa obere akpa gị? Usoro nke ịchọta ego nwere ọtụtụ ihe dị mfe ịme, ma ịkwesịrị ime ihe niile n'ụzọ ziri ezi na n'oge kwesịrị ekwesị ka ị ghara ịfufu ego gị ruo mgbe ebighị ebi.
Bulie akaụntụ QIWI n'elu
Mgbe ụfọdụ ọ na - eme na mmadụ na - emepụta e-akpa maka onwe ya na ọrụ ọ bụla, mgbe ahụ, ọ na - ata ahụhụ ruo ogologo oge, ọ maghị otú e si eme ya ka ọ ghara ihie ụzọ, ọ bụghị ịnyefe ego na akaụntụ ọzọ ma ghara ịkwụ ụgwọ ọkara nke nnyefe ahụ maka ọrụ ahụ. Na usoro Qiwi iji mejupụta akaụntụ ahụ dị mfe. Hụkwa: Otu esi eji PayPal Nwee obere akpa ego WebMoney Olee otú ị ga-esi bulie obere akpa Qiwi Ịnye ego na obere akpa QIWI dị mfe, na e nwere ọtụtụ ụzọ isi mee ya.
Ịmepụta akpa ego QIWI
Ugbu a, ọtụtụ ndị ahịa ha na-eme ihe site na netwọk, nke a na-achọkwa wallets nke ọma, nke ị nwere ike ịfe ngwa ngwa nyefee ego na ụlọ ahịa ma ọ bụ onye ọrụ ọzọ. E nwere usoro dị iche iche nke ịkwụ ụgwọ, mana otu n'ime ndị kasị ewu ewu na oge bụ QIWI.
https://termotools.com ig.termotools.com © Qiwi 2020